Forex & Gold Trading B++ Course – Sonic Generation
Forex & Gold Trading B++ Course
LeaveaComment / Ads / By Dannial Fine
Forex & Gold Trading B++ Course ကို မန္တလေးမြို့အတွက် ဖွင့်လှစ်ဖို့ ရောက်ရှိလာပါပြီ ခင်ဗျာ။ အရင် Batch က သင်တန်းတက်ဖို့ မမှီလိုက်တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေရော၊ နောက်ဖွင့်မယ့် အတန်းကျရင် တက်ဖို့ ပြောထားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေရော အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ။
👉 လက်ရှိ အလုပ်အပြင် ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ထပ်မံရှာဖွေလိုသူများ၊
👉 Forex & Gold Trading ကို Mindset မှန်မှန်နဲ့ စီးပွားရေး တစ်ခု အဖြစ် စနစ်တကျ ပြုလုပ်လိုသူများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါတယ်။
🛄 Forex & Gold Trading ဆိုတာ အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလိုဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုသာ ဖြစ်တာကြောင့်….
ချက်ချင်းလက်ငင်း ချမ်းသာလိုသူများ၊ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ချမ်းသာလိုသူများ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် မသင့်ပါဘူး ခင်ဗျာ။
🥇Sonic Generation🥇 ဆိုတာ ကော်မရှင် နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ အဖွဲ့ အစည်း မဟုတ်ဘဲ Pure Trader များကိုယ်တိုင် Trader Side မှ ရပ်တည် သင်ကြားပေးနေတဲ့ သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Transaction များများ Lot size များများ Trade စရာ မလိုဘဲ အမြတ်များများရရန်သာ သင်ကြားပေးပါတယ်။
Forex Trading ကို စတင်လေ့လာနေပြီဆိုရင် အကောင့်ဖွင့်၊ Deposit ထည့်ဖို့ ဆိုတာ နောက်ဆုံးမှ လုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။
✅ ပညာ အရင်တတ်အောင် သင်ရပါမယ်။
✅ အတွေ့အကြုံရအောင် အချိန်ယူပြီး Demo နဲ့
စက်ဘီးစီး၊ ဆိုင်ကယ်စီး သင်သလိုပါဘဲ။ လက်ကိုင်ကို ကောင်းကောင်းမနိုင်သေးဘဲ လမ်းမပေါ်မှာ တက်ပြီး အစီးကျင့်မယ်ဆိုရင် အင်မတန် အန္တရာယ်များပါတယ်။
မလိုအပ်ဘဲ ဆုံးရှုံးမှုတွေ မရှိရအောင် နည်းစနစ်မှန်မှန်၊ Mindset မှန်မှန်နဲ့ စေတနာရှေ့ထားပြီး သင်ကြားပေးနေတဲ့အတွက် Feedback ကောင်းတွေ ရရှိထားတဲ့ 🥇 Sonic Generation 🥇 မှာ အရင် သင်တန်းတက်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Forex & Gold Trading နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု အဖြစ် Mindset မှန်မှန်နဲ့ စနစ်တကျ ပြုလုပ်လိုသူများကို Sonic Generation မှ ဂုဏ်ယူစွာ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ 😊
3 လမှ တစ်ကြိမ်သာ ဖွင့်ပြီး လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် အမြန်ဆုံးစာရင်း ပေးသွင်းမှ နေရာရဖို့ သေချာမှာမို့ ခုချက်ချင်းဘဲ သင်တန်းအပ်နှံထားလိုက်ပါနော်။
👉သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများသည် ကွန်ပျူတာကို အခြေခံအဆင့် အသုံးပြုတတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင်တန်းလာလျှင် Laptop ယူဆောင်လာရပါမည်။
သင်တန်းမှာ သင်ကြားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့
📈 Introduction to Forex Market
📈 Support & Resistance
📈 Candle Stick Pattern
📈 Using Indicator
📈 Fundamental Analysis
📈 Using MetaTrader4 Application
📈 Mobile Version
📈 Desktop Version
📈 Risk & Reward Management
📈 Basic Winning Strategy
📈 Trading Psychology
🕑 သင်တန်းနေ့ရက် နှင့် သင်တန်းအချိန် 🕑
16-11-2019 (Sat) – 2:30 PM – 5:30 PM
17-11-2019 (Sun) – 2:30 PM – 5:30 PM
18-11-2019 (Mon) – 5:30 PM – 8:30 PM
19-11-2019 (Tue) – 5:30 PM – 8:30 PM
💵 သင်တန်းကြေး 💵
Early Bird Promotion အနေဖြင့် (01-11-2019) ရက်နေ့ မတိုင်မီ သင်တန်း အပ်နှံသူများသည် (108,500Ks.) သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
👍 Bonus အနေနဲ့ (25-10-2019) ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပထမဦးဆုံး သင်တန်းအပ်သူ (၅) ဦးကို Forex & Gold Trading အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ One-by-One Online Coaching Session (2) ကြိမ် ကို ခံစားခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် Online Course ကိုပါ ပြန်လည် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားမလည်မချင်း၊ မမှတ်မိမချင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည် ကြည့်ရှု့ပြီး သင်ကြားနေနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးပါဘဲ။
🏨 သင်တန်းနေရာ 🏨
27 လမ်း၊ 79×80 လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
☎ စုံစမ်းရန် ☎
Chat Box (Or) 09-7840 20 646ယ 09 44 000 2505 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး သင်တန်း အပ်နှံနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Best course for beginners and inexperienced traders who wants to win. Based on his own experience in Forex trading he will show you step by step how not lose. Should take both Beginners and Advance course if you want to earn extra $£€$$$..
Aung Thu We Lin
SG is the best place to learn about Forex. Ordinary training places only teach how to trade and watch market. Saya Ko Thant showed us the way from the beginning to the end including how to take care of your mental health, physical health, business plan, profit loss chances and alot of things you wouldn’t expect fromaforex training. Very caring upon each individual. Im very glad that I found out SG and Ive learnt alot from Saya Ko Thant’s lessons and his own experience. I recommend SG and you won’t disappoint.
I would recommend Sayar Ko Thant’s Sonic Generation Forex and Gold Trading basic and professional courses. If you are interested in forex and gold trading, these courses are for you.
Total Website Visits: 300146